သေတာကြေတာတွေ ကို ကျော်ဖတ်သွားတယ်။
ဖတ်သွားပါတယ်...။ ခုမှ သေချာသိတော့တယ်...၊ basic မရှိလို့ပါ။
ရှပ်ြီ့ပီး ဖတ်သွားတယ်။ ခွှုင့်လွတ်ပါနော်.။ နားလည်သူများပြောပါလေ.။
ခက်တယ်..ဆရာကြီးတွေ ကလည်းမလာကြသေးဘူး.။ သူတို့ဖတ်ပြီးမှ တစ်ခါပြန်လာဖတ်မယ်။ ဆွေးနွေးချက်များကို...။
ဖတ်သွားတယ်ဗျ။ အဲဒီ့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းက မီးလည်း တော်တော်နဲ့ တော့ ငြိမ်းမယ် မထင်ဘူးဗျ။ငြိမ်းလည်း ခဏပဲ ဖြစ်ဖို့ များတယ်။ Imagine သီချင်းကို သတိရလိုက်တာ။
ဒီလောက်ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ အကြာရှည်ဆုံး စစ်ပွဲနဲ့ ရန်ငြိုးရန်စတွေကို နောက်ခံသမိုင်းနဲ့တကွ အလွယ်တကူ ဖတ်ရနားလည်လွယ်အောင် တင်ပြထားတာအတော်ကောင်းပါတယ်။
မြန်မာဘလော့ လောကမှာ အရေးပါတဲ့ (World, local) သမိုင်းနဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကို သေချာလေ့လာတင်ပြပေးနေသူ ရှားရှားပါးပါး (ကိုမောင်ရင်..ကိုအောင်သာငယ်.စသည်) ဘလော့ဂါများအဖြစ် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒီထက်မကလဲ ပေါ်ထွန်းလာပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်။
စစ်ပွဲအပေါ် မှတ်ချက်အနေနဲ့တော့ အထူးတလည်မပေးလိုတော့ပါ။ တကမ္ဘာလုံးက နိင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းကြသော်လည်း အဖြေမပေါ်နိုင်ကြတာဟာ.. လူမျိုးရေး.. ဘာသာရေး . အစရှိတဲ့ .. သိပ်ကိုထိလွယ်ရှလွယ် မူရင်းဗီဇ မွေးရာပါ ဇာတိမာန် နဲ့ ယုံကြည်မှုတွေက မြစ်ဖျားခံနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်.. ဒီမီးဟာ ဒီလိုပဲ တငွေ့ငွေ့ဆက်တောက်လောင်နေမှာပါပဲ။
.. အဲလို မွေးရာပါ ဇာတိဗီဇ နဲ့ ယုံကြည့်မှုအပြင် နောက်တစ်ခု အရေးပါတာက အစုအဖွဲ့ ပေါ်မှီတွယ်တဲ့ အတ္တစိတ်ဓါတ်ပါပဲ။ အဲဒီစိတ်ဓါတ်မျိုး ရဲ့သက်ရောက်မှု အကျိုးဆက်ကို အထင်ရှားဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတွင်းမှာလဲ မြင်နိုင်ပါတယ်။ မှားခြင်း၊မှန်ခြင်း၊ တရားခြင်း၊ မတရားခြင်းတို့ကို ဆုံးဖြတ်ရမှာ.. ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအပြင်.. ထို အစုအဖွဲ့ပေါ်ကာကွယ်လိုစိတ်၊မှီတွယ်နေတဲ့ အတ္တစိတ်များကြောင့်.. တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ဘယ်လိုမှ reconcile လုပ်မရတဲ့ အခြေအနေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေရတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။
I think this is based on radical belief, dignity and existence as human being in this World, moreover, no one knows who are standing behind of these happening for long fighting...
anyway, thanks for the maps...it is very clear to understand.
လက်စားချေတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မဆုံးနိုင်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။ ဒီမီးဟာလည်း ဘယ်တော့မှ မငြိမ်းနိုင်တဲ့ မီးပဲ ဖြစ်နေဦးမှာပါ။ ခြေထိုးသူ၊ မြှောက်ပင့်သူတွေ ရှိနေတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း ကာယကံရှင်တွေရဲ့ လူမျိုးကြီးဝါဒ နဲ့ အာဃာတတရားတွေ မခန်းသရွေ့ ခံပေဦးတော့ မြေဇာပင်တွေ .....
အပြင်းဆုံးမီလျှံများ ရဲ့ သမိုင်းကို လာခံစားပါတယ်။
ဟိုးအရင်ကတော့ အဲ့ဒီဒေသဖြစ်စဉ်တွေကို ဖတ်ဖူးတယ်။ သမိုင်းစဉ်အဆက်ပေါ့။ ရူးချင်သလိုလိုဖြစ်သွားတာနဲ့ ရပ်ထားလိုက်ရတယ်ဗျ။ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်တွေတင်မကပဲ နောက်ကွယ်က နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေလဲ ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်ဗျို့။
ဒီလောက်ရှုတ်ထွေးနက်နဲလှတဲ့ ပါလက်စတိုင်း-အစ္စရေး ပဋိပကအကြောင်းကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သဘောပေါက်နားလည်လွယ်အောင် ရေးပြနိုင်တာကိုချီးကျူးလေးစားမိတယ်၊ ဒီစစ်ပွဲတွေကြည့်ပြီး မှတ်သားစရာနည်းနာများ နဲ့ ဆောင်ရန်ဆောင်ရန်တွေကိုပါ သုံးသပ်ဆင်ခြင်မိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
18 Jan 09, 05:39
Nanda: ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းလွန်းလှတဲ့ ကြာရှည်ဆုံး ဒီစစ်ပွဲနောက်ခံအကြောင်းတွေကို ရှင်းရှင်းလွယ်လွယ်လေးရေးပြထားတာမျိုးဖတ်ချင်လို့ရှာနေတာ ကျေးဇူးပဲဗျာ
18 Jan 09, 05:40
Nanda: မိုးမခမှာ စောင့်ဖတ်ရတာ စိတ်မရှည်လို့ တလုံးတစည်းထဲ ထိုင်ဖတ်လို့ ရောက်လာပါတယ်
18 Jan 09, 11:32
သားထူး: အာရပ်-အစ္စရေး အကြောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ကိုရေ
သို့သော် ဥာဏ်မမှီ၍ မဆွေးနွေးတတ်ပါ
အေးအေးဆေးဆေး ထပ်ဖတ်ပါဦးမယ်။ သေသေချာချာ ရှင်းလင်းရေးပြထားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အကြောင်းတွေ ဖတ်ရမှာ ခက်တယ်ထင်လို့... အခုတော့ အသက်လေး ရလာပြီဆိုတော့ ကြိုးစားဖတ် ရမယ် (ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆုံးမခြင်းပါ)
ဒါပေမယ့်... အင်း... ဒါပေမယ့် ပေါ့လေ...
အဆင့်မမှီလို့လို့ ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်မှတ်မိပါတယ်...
thanks for your post, it is very useful and lots of historical information.
ခုမှပဲ သေချာသိတော့တယ် အန်ကယ်ရေ့ ကျေးဇူးဗျာ စစ်ဆိုတာနဲ့ အရင်ဆုံးခံလိုက်ရတာကတော့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပါပဲ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ၊ လူဆိုတာ အတ္တ မကင်းခြင်းနဲ့ လောဘ တွေကြားမှာ သားကောင်ဖြစ်သွားရတဲ့ သူတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
အသွင်မတူတဲ့ လူမျိုး ၂ ခုရဲ့ အတူပေါင်းဖက် နေထိုင်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို သိရှိသွားပါတယ်။
ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်၊ အသေအချာ ရေးထားတဲ့အတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုအောင်သာငယ်။
ဂျူးတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုတော့ သိပ်သဘောကျတယ်။
သူတို့ လူမျိုးတွေရဲ့ နောက်ခံသမိုင်းတွေကလဲ အံ့မခန်းတွေပဲနော်။
လူမျိုးစုလိုက် စည်းလုံးညီညွတ်မှုက အားကျအတုယူစရာပဲ။
၆ ရက် ကြာစစ်ပွဲကို ဖတ်တုန်းကဆို ဂျူးဖြစ်ချင်စိတ်တောင် ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။
19 Jan 09, 09:46
YoungGun: ဗဟုသုတတွေလည်း တထောကြီးကိုရသွားတယ် ရင်လည်းမောတယ်ဗျာ
19 Jan 09, 14:16
ဒေါင်းမင်း: သက်တမ်းရှည်ပဋိပက္ခ ကိုအခုလိုတစုထဲဖက်ရတာတကယ်အနှစ်ပဲ
အမုန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ စစ်ပွဲတွေထဲမှာ အပြင်းထန်ဆုံး စစ်ပွဲတွေအကြောင်းကို သေသေချာချာ ရှင်းလင်းရေးပြပေးထားတာ အရမ်းကို ကောင်းပါတယ် အစ်ကိုရေ။ တကယ့်ကို ဗဟုသုတ ပေးတဲ့ပို့ စ်လေးပါ။ ( အဟီး မပြောမဆိုနဲ့အရင်ကူးသွားပါပြီဗျာ ) အဲဒီ စစ်မီးလျှံတွေကြားမှာ အရှုံးဆုံးသူက နှစ်ဘက်လုံးက ပြည်သူတွေပါဗျာ။ သေတဲ့သူကသေ၊ ဒုက္ခိတဘ၀ရောက်တဲ့သူကရောက်၊ ပျောက်တဲ့သူကပျောက်နဲ့သူတို့ ဘ၀တွေအတွက် အမုန်းမီးတွေ အမြန်ဆုံးငြှိမ်းသတ်နိုင်ကြပါစေ။
အစ္စရေး-ပါလတ်စတိုင်း အရေးအခင်းကို အခုအရမ်းစိတ်ဝင်စားနေတုန်းရှာကြည့်တော့အကို့ဆောင်းပါးကသိပ်ကောင်းပါတယ်။ ထင်တာတစ်ခုကိုပြောပါရစေ၊ မှားရငိလည်းအမှန်ကိုပြောပေးပါ .ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေက မြန်မာနိုင်ငံကြီးကို ပါလတ်စတိုင်းခွဲခြမ်းရေးလိုဖြစ်အောင် လုပ်နေတာလားဟင်.အဖြစ်တွေကတူနေလို့ပါ
အညာသားတွေက အစွဲအလမ်း ကြီးမားတယ်။ အညာသားတွေက ရှားနှစ်လို မာကျောတယ်၊ အညာသားတွေက ၀ါးကြောလို တင်းခံတယ်၊ အညာသားတွေက ဧရာဝတီကိ...
Rock တွေကလွဲရင် ကျနော်နှစ်သက်တဲ့ နောက်ဂီတပုံစံတခုက Reggae ပါပဲ။ ရက်ဂေးတွေ ကြားရရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိပ်အပိုင်းတခုခုကတော့ အဲဒီသီချင်းနဲ့အတူ အလ...
၂၀၁၂ ဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အဆုံးသပ်တဲ့လား...။ ဟောကြားချက်များ မှန်ကြပါစေ...။ ကိုယ်ကတော့ ပူလောင်လွန်းလှတဲ့ ကိုယ့် ဘ၀ကြီး အမြန်အဆုံး သပ်ဖို့ကိုပဲ စဉ်...
ရင်တပွေ့စာ... တိမ်တအုပ်နဲ့... အိပ်မက်တဆုပ်ကို... မျှားမိခဲ့… ရေခမ်းသွားတဲ့... ပင်လယ်မှာ… ။ ATN